musha > Travel Europe > Best European Restaurant Michelin Guide 2019
The Best European resitorendi Michelin muperekedzi anopa mavambo huru kuronga chitima rwendo kumativi Europe. The Michelin muperekedzi ikozvino zvinowanika vafambi European mumwe kusarudzwa maresitorendi nemahotera mu 38 maguta European. Maguta itsva vatatu ichawedzerwa ichi 2019 magazini: Zagreb uye Dubrovnik, Kiroshiya, uye Reykjavik, Aisirendi. Anonymous akadzidzisa vaongorori kushanyira uye kusarudza maresitorendi apo kushandisa rakakurumbira Michelin zvokudya nyeredzi-Rating hurongwa uye shandisa yakafanana muitiro kuti Hotels. Zvakaguma: zvakawanda varumbidzwa establishments nokuda zvadzinofarira zvose uye zvemari.
Vafambi vanogona nechivimbo kuvimba musi Michelin anotungamirira vakwanisewo chitima rwendo kuti zvikuru richinaka! Takaona kujekesa pasi Best European resitorendi Michelin muperekedzi, uye chokwadi, yakave nechokwadi chekuti kumira kwese kuri nyore dziine Train!
Best European resitorendi MICHELIN Guide: Itari
Italy ndiyo inozivikanwa zvikuru mipiro ayo nyika ounyanzvi, akitekicha, fashoni, dhanzi, mabhuku, patani, uye firimu - mazita anoenderera mberi, uye hatina kunyange kumbotaurwa mupiro Yakanakisisa European resitorendi Chiitiko.
Mashoko makuru 2019 ndiko kuti Italy ane itsva-nyeredzi matatu resitorendi, Michelin-soro rukudzo!
Uliassi, yaiva Senigallia musi Italy raMwari reAdriatic, pakupedzisira ine nyeredzi nhatu dzakamirirwa kwenguva refu mushure mekupedza makore akati wandei padanho renyeredzi mbiri.
Zvinoenderana neyekudyira blog Fine Dining Lovers. Mhanyai nehanzvadzi uye mukoma chikwata Catia uye Mauro Uliassi, muresitorendi unoisa rinorema Kusimbisa zvomugungwa uye anopa zvose anoravira menu uye la carte dzokudyira. zvino Uliassi mumwe mumwe-nyeredzi matatu namapfumbamwe Restaurants kuItaly. Izvi zvinoreva kuti vose regore rakapera-nyeredzi nhatu dzokugara akaramba chinzvimbo chavo, kusanganisira famed Modena resitorendi Osteria Francescana.
Rimini para Senigallia Zvitima
Rome kuna Senigallia Zvitima
Zvitima kuna Ancone Senigallia
Florence kuna Senigallia Zvitima
Kune ikozvino 367 starred Best European resitorendi Michelin, kubva 356 gore rapera.
Pakanga pasina itsva mbiri-nyeredzi restaurants pachikwata gore rino. Mutungamiriri anoita kusanganisa whopping 29 itsva imwe-nyeredzi restaurants kubva anopfuura maviri dhazeni Italian makanzuru. Izvi zvinounza nhamba kuti 318. uchitikurudzira, mutungamiriri zvinhu 367 starred mumaresitorendi, kubva 356 gore rapera.
Best European resitorendi MICHELIN Guide: Great Britain
Zita remadunhurirwa rokuti "nyika Oscars zvokudya indasitiri" The mibayiro mumhemberero Waterloo raMwari BFI IMAX mabhaisikopo chinhu chinokosha nokuda chef kubva munyika.
gore rino, Zvakanakisisa European kuresitorendi Great Britain yakaramba dzisisina pamwe kumaresitorendi shanu kudzidza vakakwanisa kuramba nyeredzi dzavo. Zano akatura befu! The Araki, Restaurant Gordon Ramsay uye Alain Ducasse panguva Dorchester vaiva London establishments kuti abate accolades dzavo, sezvakaita Heston Blumenthal kwakaita Fat Duck uye Alain Roux raMwari Waterside Inn, zvose ingachema.
Kune zvakawanda nezvitima vakananga London panguva dzakasiyana-siyana muEurope. Head kuti SaveATrain bhuku tikiti mumaminitsi kuongorora zvakanaka chibvukuche kunze!
The Michelin Guide 2019 zvizere pasi
Alain Ducasse pa The Dorchester
Best European resitorendi MICHELIN Guide: Netharenzi
The Netherlands (kana Holland) inyika diki uye izere nemifananidzo inozivikanwa pasi rese. Beautiful girobhu racho minda, mahwindimiri, chizi misika, gadzirwa nomuti shangu, migero yose Amsterdam, ounyanzvi Vekare Masters, Delft Blue wevhu, va neutsanzi mvura-manejimendi, uye mamiriyoni e mabhasikoro. Uye tenda kunaka nokuda mabhasikoro. pamwe 2019 MICHELIN Guide kuNetherlands ane dzinokwana 571 mumaresitorendi uye 263 Hotels. Uri kuenda tinoda Workout.
Gore rino kusarudzwa inoratidza zvitsva Restaurants maviri maviri-starred uye 12 establishments kugamuchira imwe nyeredzi kekutanga.
Kune ikozvino 89 mumwe-starred Restaurants in zvachose. At Derozario muna Helmond, Jermain De Rozario anoisa yake kuruka pamusoro Indonesian chili. pa Key resitorendi Tilburg, Paul Kappe anokwezvawo Diners pamwe chili ake ano pamwe zvikuru siyana, sezvakangoita Jeroen Brouwer pa ari Loohoeve muna Schoonloo uye Thomas Van Santvoort pa musikana muna Kerkdriel. Kuwanda siyana ndiko chii kuratidza Kufungidzira muAtlantic kubudikidza Jim uye Mike Cornelissen pa Rijnzicht muna Doornenburg, uye ndicho delicacy pakati ndiro zvaipiwa panguva OONIVOO Uden. Nokuti vanoda zvokudya zvakanaka umbozha nharaunda, Bougainville muAmsterdam, uye Voltaire muna Leersum vari Mhedziso musts.
KweBrussels kuna Tilburg Zvitima
Antwerp kuna Tilburg Zvitima
Berlin kuna Tilburg Zvitima
Paris kuna Tilburg Zvitima
Where kubata chitima
Amsterdam Central Station Nde chiteshi uye ndiye mwoyo chaiye muguta: nechepakati kwete chete nezita, asiwo sezvo guru mabhazi chinja nzvimbo, saka zvingava nzvimbo yakanaka kubata chitima wo.
Best European resitorendi MICHELIN Guide: Speini
Madrid ndiro guta guru Speini uye chikuru Municipality maviri Community of Madrid uye Spain yose.
Madrid mutambo nemagariro. Yakanga kwemwoyo ari 1920s. Ashanyirwa mabhuku Greats dzakadai Ernest Hemingway uye Fitzgeralds, F Scott uye Zelda, pakati vamwe.
Iyo ine chikafu musika chiitiko kuda, asi Michelin Star restaurants havasi vaya kusuwa kana!
Usati musoro wako yokutanga, isu zano iwe kutanga manheru dzako pamwe cocktaileja kubva broody Museo Chicote bhaa. Nzvimbo imwe Hemingway kuti mupfungwa uye pano ukaona kufarira zvinwiwa ake, uye vashoma gumi vamwe iwe zvimwe hauna akaedza. Nemusoro ipapo zvaunga mangwanani pamberi kunhonga.
Madrid ane kumativi 3,100 mumaresitorendi, asi vashomanana vave paakavapa nyeredzi nokuda mukurumbira Michelin Guide. Pane 16 maresitorendi muMadrid with Michelin nyeredzi: DiverXO (nyeredzi nhatu); Santceloni, La Terraza Del Casino, Ira Champion Arola, Ramon Freixa Madrid uye El Club Allard (nyeredzi maviri); uye Kabuki, Kabuki Wellington, DSTAgE, Albora, Mbudzi uye Punto MX (imwe nyeredzi). Pamusoro pe, pamusoro kweguta imwe resitorendi (deko) ane nyeredzi maviri uye kune vatatu mumwe-nyeredzi restaurants: Casa Jose, Chiron, uye Montia. Vose vanoshumira nyika-kirasi zvokudya uye kupa basa rakaisvonaka.
Our pamusoro Michelin nyeredzi resitorendi kusarudzwa muMadrid guta riri DiverXO (3 nakisisa nyeredzi!)
The zvisikwa Chef David Muñoz vane mwoyo gourmets pose. Coolness, ushingi, uye kugona ndiyo kiyi yekubudirira kweDiverXO. resitorendi Uku Muterere achinje pamwe mwaka, asi chete ane mbiri mikana. The XOW Menu uye Menu Glotón XOW. Both the menus offer the same food and only vary in quantity and price.
Zvakanga Zvakaoma Kusvika Ikoko: Nzira yakanakisisa kuti kunonga iyi Best European resitorendi ndeyokuita Metro uye kuwana kure Tetuan Station (mutsetse 1).
Unoda kuziva nzira yakanakisisa kuti kune chimwe chaizvozvo nzvimbo Europe nechitima? Save A Train ehe saizvozvo! Musoro kuti Website yedu kuwana zvakanakisisa mitengo, mumasekonzi!
Unoda embed yedu Blog pambiru zviende yako nzvimbo, unogona kana kutora mapikicha edu uye rugwaro uye chete tipei kadhi rine Link kuti ichi Blog romukova, kana iwe tinya pano: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fbest-european-restaurant-michelin%2F%3Flang%3Dsn - (Mupumburu pasi kuona Embed Code)
#michelin #michelinstar #thenetherlands chikafu travelengland chavenda travelitaly travelnetherlands travelspain